10/22/13 ~ Myanmar Forward
အမျိုးသမီး များလွန်းသည့်အိမ်တွင် အမျိုးသားသီးသန့်နေရာ ထားရှိခဲ့သည့် မတ်ဒေမွန်
Posted by drmyochit Tuesday, October 22, 2013, under နိုင်ငံတကာသတင်းများ | No comments
မတ်သည် အာဂျင်တီးနားသူ ဇနီးသည် လူစီယာနာ ဘိုဇန် ဘာရိုဆိုအပြင် သမီး(၄)ဦးနှင့် နေထိုင်လျှက် ရှိရာ တစ်ခါတစ်ရံတွင် အမျိုးသမီးများနှင့် ကင်းကွာလျှက် တစ်ဦးတည်း အေးအေးချမ်းချမ်း နေထိုင်သည့် နေရာလေး တစ်ခုကို သီးသန့် ဖန်တီးထားခြင်း ဖြစ်သည်။
မိမိနေအိမ်တွင် အမျိုးသမီး အရေအတွက် ပိုမိုများပြားနေသဖြင့် အမျိုးသားသီးသန့် ဧရိယာတစ်ခု ဖန်တီးထားရကြောင်း မတ်ဒေမွန်က ပြောကြားခဲ့သည်။ မတ်သည် အာဂျင်တီးနားသူ ဇနီးသည် လူစီယာနာ ဘိုဇန် ဘာရိုဆိုအပြင် သမီး(၄)ဦးနှင့် နေထိုင်လျှက်ရှိရာ တစ်ခါတစ်ရံတွင် အမျိုးသမီးများနှင့် ကင်းကွာလျှက် တစ်ဦးတည်း အေးအေးချမ်းချမ်း နေထိုင်သည့် နေရာလေး တစ်ခုကို သီးသန့် ဖန်တီးထားခြင်း ဖြစ်သည်။ အော်စကာဆုရှင် မင်းသားနှင့် စာရေးဆရာဖြစ်သူ မတ်က "တစ်ခါတစ်ခါတော့ ငြီးငွေ့စရာတွေ ဖြစ်လာတတ်တယ်။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော့်အတွက် သီးသန့် အမျိုးသား နားနေစရာ နေရာလေး သတ်သတ်မှတ်မှတ် ထားရှိဖို့ လိုလာပါတယ်။ ကျွန်တော် ဘာလုပ်နေတယ် ဆိုတာကို ဇနီးနဲ့ သမီးတွေ မသိနိုင်မယ့် နေရာမျိုးလေ"ဟု ဖွင့်ဟခဲ့သည်။
၎င်းက "အဲဒီမှာ အားကစား မဂ္ဂဇင်းတချို့ရှိမယ်။ ကျွန်တော့်ဖုန်းရှိမယ်။ ပြီးတော့ ကျွန်တော့်စိတ်ကြိုက် သီးသန့် အဝတ်အစားတွေ ရှိမယ်။ အမျိုးသမီးတွေနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အသုံးအဆောင်တွေ၊ အဝတ်အထည်တွေ အားလုံး ကင်းရှင်းနေမယ့် ပုံစံမျိုး ဆိုပါတော့"ဟုလည်း ဆိုသည်။ အသက်(၄၃)နှစ်ရှိ မတ်က "တစ်ခါတစ်လေ အဲဒီနေရာက ကျွန်တော့် အလုပ်ခန်းလည်း ဖြစ်နေတတ်တယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဒီလို သီးသီးခြားခြားလေး နေရာတစ်ခု ရှိနေတာကို ကျွန်တော် သဘောကျပါတယ်"ဟုလည်း ပြောဆိုသွားသည်။
ထူးထူးဆန်းဆန်း လက်ထပ်ခွင့် တောင်းခဲ့သည့် ဘောလုံးနည်းပြ
ဖာဘရီစီယို အနေဖြင့် ရုတ်တရက် ဒဏ်ရာရသွားသည့်ဟန် မြေပြင်ပေါ်တွင် အော်ဟစ် ညည်းညူနေရာ ၎င်း၏ ချစ်သူရော၊ ဆေးအဖွဲ့များပါ စိုးရိမ်တကြီးဖြင့် ၎င်းထံ အပြေးရောက်ရှိသွားခဲ့
အမေရိကန် နိုင်ငံမှ ဘောလုံး နည်းပြ တစ်ဦးသည် ချစ်သူကို လက်ထပ်ခွင့် တောင်းရန်အတွက် ထူးထူးဆန်းဆန်း အစီအစဉ် တစ်ခုကို ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ကယ်လီဖိုးနီးယားမှ ဖာဘရီစီယို နာဇာရီသည် ဖရက်စ်နို ပစိဖိတ် တက္ကသိုလ် အမျိုးသမီး ဘောလုံးအသင်းအတွက် နည်းပြအဖြစ် တာဝန်ယူထားသူ ဖြစ်သည်။ ထိုအသင်းတွင် ဖာဘရီစီယို၏ ချစ်သူဖြစ်သော ဆာရာဗီဂါလည်း ပါဝင် ကစားလျှက် ရှိသည်။ ဖာဘရီစီယိုသည် ချစ်သူကို ထူးထူးဆန်းဆန်း ပုံစံဖြင့် လက်ထပ်ခွင့် တောင်းခဲ့သော်လည်း ၎င်းကြောင့် ဘောလုံးအသင်း ဆေးအဖွဲ့မှ တာဝန်ရှိသူများ အလုပ်ရှုပ်ခဲ့သေးသည်။ ဖာဘရီစီယို အနေဖြင့် ရုတ်တရက် ဒဏ်ရာရသွားသည့်ဟန် မြေပြင်ပေါ်တွင် အော်ဟစ် ညည်းညူနေရာ ၎င်း၏ ချစ်သူရော၊ ဆေးအဖွဲ့များပါ စိုးရိမ်တကြီးဖြင့် ၎င်းထံ အပြေးရောက်ရှိသွားခဲ့သည်။
ထို့နောက် ဆာရာက အနီးအနား ရောက်လာမှ ဖာဘရီစီယိုက လဲနေရာမှထကာ ဒူးထောက်ပြီး လက်စွပ်ဘူးလေးအား ထုတ်ယူကာ ခွင့်တောင်းခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ အံ့ဩ ဝမ်းသာသွားသည့် ဆာရာသည် စိတ်လှုပ်ရှားစွာဖြင့် ခေါင်းညိတ်ခဲ့ပြီးနောက် ဘောလုံး လေ့ကျင့်ရေးကွင်းထဲမှ မိတ်ဆွေ အပေါင်းအသင်းများက ဝိုင်းဝန်း ဩဘာပေးခဲ့ကြသည်။ ဆာရာ၏ သူငယ်ချင်း အမျိုးသမီး ဘောလုံးသမားများက ကြည်နူးစရာ မြင်ကွင်းအတွက် အဆိုပါ စုံတွဲကို အော်ဟစ် ကောင်းချီးပေးခဲ့ကြသည်။
အဆိုပါ ဖြစ်စဉ်ကို ရိုက်ကူးထားသည့် အပျော်တမ်း ဗီဒီယို ဖြတ်ပိုင်းလေးအား ယခုလဆန်းက You Tubeတွင် လွှင့်တင်ခဲ့ပြီး "ဘောလုံး နိဗ္ဗာန်ဘုံမှာ အချစ်တစ်ခု ဖန်ဆင်းခြင်း"ဟု ကဗျာဆန်ဆန် ခေါင်းစဉ်တပ်ထားခဲ့သည်။ ထိုလက်ထပ်ခွင့်ပန်မှု အပြီးတွင် ဖာဘရီစီယိုရော၊ ဆာရာတို့ပါ Facebookပေါ်၌ စေ့စပ်ပြီးဖြစ်ကြောင်း ပြောင်းလဲ ရေးသားခဲ့ကြသလို ဆာရာက သူမ၏ တောက်ပသော စေ့စပ် လက်စွပ်လေးကို ဂုဏ်ယူစွာ ပြသနေသည့် ဓာတ်ပုံကိုလည်း လွှင့်တင်ခဲ့သည်။ ဖာဘရီစီယိုက အဆိုပါ အစီအစဉ်ကို အလွန်နည်းပါးသည့် မိတ်ဆွေအချို့သာ ကြိုတင် သိရှိထားကြောင်း ဆိုသည်။
အစောပိုင်းက ဖာဘရီစီယို ခြေထောက် ဒဏ်ရာ ရသွားသည်ကို အစစ်အမှန်ထင်သောကြောင့် ၎င်းကို ဓာတ်ပုံရိုက်နေသူ တစ်ဦးအား အမျိုးသမီး ဘောလုံးသမား တစ်ဦးကပင် ဒေါသတကြီး ကန့်ကွက် ရန်တွေ့ခဲ့သေးသည်။ ယင်းမှတ်တမ်း ဗီဒီယိုကို ကြည့်ရှုသူ အများစုက ဖာဘရီစီယို၏ စိတ်ကူးသည် ချစ်စရာကောင်းပြီး ဖန်တီးမှုစွမ်းရည် ပြည့်ဝကြောင်း ချီးကျူးခဲ့ကြပြီး အချို့ကမူ ဆေးအဖွဲ့ကို ကြိုတင် အသိပေးသင့်ကြောင်း မှတ်ချက်ပြုခဲ့ကြသည်။
Posted by drmyochit Tuesday, October 22, 2013, under သတင်းများ |3comments
မိုက်ကယ်အဲရစ် ဟု ဆိုလျှင် လူအတော်များများ မသိကြပါ။ မြန်မာနိုင်ငံသားများလည်း မသိသလို၊ ဘူတန်နိုင်ငံသားများလည်း မသိဘူး။ အင်္ဂလိပ်လူမျိုးများကို မေးလျှင်လည်း မသိဘူးဟုသာ ဖြေကြပါတယ်။ မိုက်ကယ်အဲရစ် ဆိုသည်မှာ ယနေ့မြန်မာနိုင်ငံတွင်း ဂျာနယ်များ၊ ပုဂ္ဂလိက သတင်းစာ မျက်နှာဖုံးများတွင် ပုံကြီးများဖြင့် အမြဲဖော်ပြခြင်းခံနေ ရတဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ယောင်္ကျားဖြစ်ပါ တယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည် ပုံတွေ ပလူပျံနေပေမယ့် မိုက်ကယ်အဲရစ် ဓာတ်ပုံကိုတော့ ဘယ်ဂျာနယ်၊ ဘယ်သတင်းစာကမှ ဖော်ပြတာ မရှိဖူးပါဘူး။
မိုက်ကယ်အဲရစ်ဟာ ဘူတန်/တိဘက် မျိုးနွယ် တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး ကျူးဘားမှာ မွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။ မဟာရာန ကိုးကွယ်သူတစ်ယောက်ပါ။ ၁၉၇၂ မှာ ၎င်း ထက် တစ်နှစ်ကြီး တဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကိုလက်ထပ်ပေါင်းသင်းခဲ့ပါတယ်။ လက်ထပ်ပြီးနောက် မိုက်ကယ်အဲရစ်ရဲ့ ဘဝက သာယာခဲ့ပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကလည်း အိမ်ထောင်ရေးမှာ တာဝန်ကျေသူတစ်ဦးဖြစ်ပြီး မယားဝတရား အားလုံး ကျေပွန်သူဖြစ်ပါတယ်။ မိုက်ကယ်အဲရစ်ရဲ့ မိဘ များကိုလည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ၎င်းရဲ့ မိဘများလို သဘောထား တာကြောင့် မိုက်ကယ်အဲရစ် ရဲ့ ဘဝ သာယာခဲ့ပါတယ်။ ဇနီးသည် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မှာ မိုက်ကယ်အဲရစ်မပါဘဲ ဘယ်မှ သွားလေ့မရှိပေ။ မြန်မာနိုင်ငံတောင် မပြန်ပဲ လင်ယောင်္ကျားအပေါ် သိတတ်ခဲ့တာကြောင့် မိုက်ကယ်အဲရစ် ကံကောင်းခဲ့ရပါတယ်။ အိမ်ထောင်ကျပြီး တစ်နှစ်အတွင်းမှာပဲ သားအကြီးကို မမျှော်လင့်ပဲ ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်ရဲ့ မိခင်နာမကျန်းဖြစ်လို့ မဖြစ်မနေ ဒေါ်စု မြန်မာနိုင်ငံပြန်ရာမှ ရုတ်တရပ် နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်ဖြစ်သွားတာဟာ မိုက်ကယ်အဲရစ်အတွက် ကံဆိုးခြင်းကို စတင်ခဲ့ချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ ဗြိတိန်သံရုံးမှ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို NLD ပါတီ စတင် တည်ထောင်ဖို့ အစစအရာရာ ကူညီခဲ့ပြီး နိုင်ငံရေးထဲ အပြီးအပိုင်ရောက်တဲ့အထိ စွမ်းစွမ်းတမန် ကူညီခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီနောက် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လည်း အသက် ၄၁ နှစ်ထိ နိုင်ငံခြားမှာ မိသားစုနဲ့ ပျော်ရွှင်ခဲ့ရတဲ့ နေ့တွေ ပျက်ဆီးခဲ့ရပြီး သောကတွေ ဝေခဲ့ရပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ထက် ကံဆိုးတာက မိုက်ကယ်အဲရစ်ပါ။ ပြည်တွင်း မငြိမ်းချမ်း မှုများဖြစ်ပွားနေသည့် မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ငြိမ်းချမ်းရေးနိုဘယ်ဆုရအောင် မိုက်ကယ်အဲရစ်က သွားပေးပြောခဲ့ရပါတယ်။ မိုက်ကယ်အဲရစ်ကြောင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ ၁၉၉၁ ခုနှစ် မှာ နိုဘယ်ဆုရခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီနောက် ၅ နှစ်အကြာမှာ မျိုးရိုးလည်းမရှိ၊ အပျော်အပါးလဲမလိုက်စားရပဲ မိုက်ကယ်အဲရစ်ရဲ့ ဂွေးစိ ကင်ဆာက ကုမရတော့ကြောင်း ဘီဘီစီက ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီချိန်က ကင်ဆာတွေက သိပ်ခေတ်မစားသေးပေမယ့် ဒီနေ့လိုပဲ ကင်ဆာဖြစ်သူမှန်သမျှ သေရတာချည်းပါ။ ဒီတော့ မိုက်ကယ်အဲရစ် က မကြာခင်သေရတော့မယ်ဆိုပြီး အသိပေးသလိုဖြစ်နေပါတယ်။ ကြိုတင် စီမံထားတဲ့ အတိုင်းပါပဲ ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်ကလည်း ပိုပြီးတော့ လူသိများလာပြီး နာမည်ကျော်လာပါတယ်။ အဲဒီနောက် ၁၉၉၉ မှာတော့ မိုက်ကယ်အဲရစ် သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ မိုက်ကယ်အဲရစ်သေဆုံးမှုကို ရဲတပ်ဖွဲ့အပါအဝင် တခြားဆရာဝန်တွေဆီ စစ်ဆေးခွင့်မပေးခဲ့ပါဘူး။ သေဆုံးတာကလည်း ၄င်းမွေးခဲ့တဲ့ မတ်လ ၂၇ ရက်နေ့ အတိအကျပါ။ ကြိုတင်စီစဉ်ထားတာလား၊ တိုက်ဆိုက်တာလား ဆိုတာကတော့ ဘယ်သူမှ မသိနိုင်ပါဘူး။ ဗြိတိန်လိုနိုင်ငံ၊ အမေရိကန် အထောက်အပံ့ကောင်းတဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ယောင်္ကျား တစ်ယောက်ဟာ တိုးတက်နေတဲ့ဆေးပညာကြားမှာနေပြီး ရောဂါမကုနိုင်လို့ သေတယ်ဆိုတာက လည်း သံသယ ဝင်စရာပါ။ မိုက်ကယ် အဲရစ် သေဆုံးမှုကို သွေးရိုးသားရိုး မဖြစ်နိုင်ဘူး၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို လူသိများအောင် ဆေးထိုးသတ်တာ ဖြစ်နိုင်ကြောင်း အဲဒီချိန်က ပညာရင်တချို့က သုံးသပ်ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကတော့ အဆိုတော်ရဲလေး လိုမျိုး ဇတ်နာအောင် လုပ်ပြနိုင်ပြီး ပရိတ်သက် အများကြီးရလိုက်ပါတယ်။ အဆိုတာရဲလေးက အဖေကို အရက်သမား လုပ်ပြီး ငိုပြီး သီချင်းဆိုတာ သွားတော့ မြန်မာတစ်နိုင်ငံပဲ သိပေမယ့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က လင်ယောင်္ကျားကို သေခိုင်းပြီး ဇတ်လမ်းထဲမှာ ကြမ်းပြင်မှာ လူးလိမ့်ငိုပြတဲ့ The Lady ဇတ်ကားကတော့ ကမ္ဘာကျော်သွားပါတယ်။
ပထမ ပစ်မှတ် မိုက်ကယ်အဲရစ် က ဂွေးစေ့ကင်ဆာနဲ့ သေတယ် ပြောပြီး ဒုတိယ ပစ်မှတ်ဖြစ်လာတဲ့ အလက်စန္ဒားအဲရစ်ကိုလည်း ရောဂါတစ်ခုပြပြီး ထိန်းသိမ်းထားပါတယ်။ ဖခင်လို ဂွေးစိကင်ဆာတော့ မဟုတ်ပြန်ပါဘူး။ မီဒီယာတွေနဲ့လည်း တွေ့ဆုံခွင့်မပေးသလို သူ့အကြောင်းကိုလည်း လူသိရှင်ကြား ပွင့်လင်းမြင်သာစွာ ပြောဆိုတာ မရှိပါဘူး။ အမေရိကန်နဲ့ အနောက်နိုင်ငံတွေက ၎င်း တို့ရက် မဟာဗျူဟာ ကျတဲ့ စီမံချက်တွေအောင်မြင်ဖို့ လူတွေကို ဆေးထိုးသတ်လေ့ရှိတဲ့အကြောင်း ကနေဒီ ကို သာဓက ထားပြီး ကျူးဘားပညာရှင်တွေကထောက်ပြ ကြပါတယ်။ အခုနောက်ဆုံး သူတို့တွေရဲ့ မဟာဗျူဟာအောင်မြင်ဖို့အတွက် စစ်ရေးအတွေ့အကြုံ ဘာမှမရှိ၊ ပါတီတစ်ခုတောင် ခေါင်းဆောင်မှု ကောင်းကောင်း မပေးနိုင်တဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ဗြိတိန်စစ်တက္ကသိုလ်မှာ မိန့်ခွန်းပြောဖို့ စီစဉ်ပေးပါတယ်။ အားလုံးက သမားရိုးကျ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် တစ်နေ့နေ့ အကွက်ရွှေ့စရာမရှိတော့ရင်တော့ အကြံအစဉ် တစိတ်တပိုင်းကို သိနေတဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်ကိုယ်တိုင်က နောက်ဆုံး ပစ်မှတ်အဖြစ် ဆေးထိုးသတ်ခံရပါလိမ့်မယ်။ မိုက်ကယ်အဲရစ်ရဲ့ အလောင်းကို ပြန်ဖော်ပြီး စစ်ဆေးဖို့ ဗြိတိန်ကို တောင်းဆိုကြည့်ပါ။ လုံးဝ (ဘယ်တော့မှ) ခွင့်ပြုမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါက မရိုးသားမှုဆိုတာ မြန်မာပြည်သူအားလုံး သတိပြုဖို့ သသိပေးလိုက်ပါတယ်။
Posted by drmyochit Tuesday, October 22, 2013, under ဆောင်းပါး | No comments
ကျွန်မစာရေးလေ့သိပ်မရှိပါ။ ဒါပေမယ့် KIO ကြောင့် ကျွန်မတို့ ရှမ်းနီတွေ ဒုက္ခ ဗျာပါဒတွေ များလွန်း လှလို့ ကျွန်မ ဒီစာကို ရေးခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်မတို့ ရှမ်းနီတွေဟာ ဘိုးစဉ်ဘောင်ဆက် ကတည်းက မြေပြန့်ဒေသ မှာနေ ခဲ့ကြ တဲ့ မြေပြန့် ရှမ်းတွေပါ။ မြန်မာရာဇဝင်တွေမှာ ဂုံရှမ်းတွေ အဖြစ်ဖော်ပြလေ့ရှိပြီး တချို့ကလည်း မြောက်ပိုင်းမြေပြန့် ရှမ်းလို့ ရေးကြပါတယ်။ ရှမ်းနီ(တိုင်းလိုင်)လို့ခေါ်တဲ့ သီးခြားရှမ်းလူမျိုးတစ်မျိုးအဖြစ် ၂၀၁၄ သန်းခေါင် စာရင်းမှာ ပါဝင်ဖို့လည်း ကြိုးပမ်းလျှက်ရှိပါတယ်။ တိုင်းရင်းသားလူမျိုး ၁၃၅ မျိုးစာရင်း မှာတော့ ကျွန်မတို့ကို ရှမ်းကလေးလို့ သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ ကျွန်မတို့ ရှမ်းနီလူမျိုးတွေဟာ ကချင်ပြည်နယ်နှင့် စစ်ကိုင်းတိုင်းမြောက်ပိုင်းမှာ ပြန့်ကျဲနေထိုင်ကြပါတယ်။
ကချင်ပြည်နယ်မှာ ဖြစ်ပွားတဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့် လက်နက်မကိုင်တဲ့ တိုင်းရင်းသားတွေအတွက် ဒုက္ခ ပင်လယ်ဝေ ခဲ့ရ ပါတယ်။ ကျွန်မတို့ ရှမ်းနီတွေဟာ စစ်ပွဲမှာ မပါဝင်ခဲ့ပေမယ့် စစ်ဒဏ်ကိုတော့ အများ ကြီး ခံခဲ့ရ တယ်။ စီးပွားရေးကောင်းပြီး အလှူအတန်းရက်ရောတဲ့ ကျွန်မတို့ ဗုဒ္ဓဘာသာရှမ်းနီတွေဟာ ကျွန်မတို့ ကိုယ် တိုင် ဒုက္ခသည်ဘဝရောက်ပြီး အိ်ုးပစ်အိမ်ပစ် ထွက်ပြေးခဲ့ကြရပါတယ်။ ကျွန်မတို့ ရွာတွေမှာ KIO တပ်တွေရဲ့ ရိက္ခာ အတွက် စပါးတွေပေးခဲ့ရသလို ခွဲတမ်းချတဲ့ ငွေကိုလည်းပေးခဲ့ရတယ်။ သူတို့တိုက်တဲ့ စစ်မှာလည်း မဆီမဆိုင်ရှမ်းတွေကို အတင်းအဓမ္မပါခိုင်းတယ်။ ကျွန်မတို့ မောင်တွေ သေလားရှင်လား ခုထိ မသိရသေးဘူး။ ရွာက သားမရှိတဲ့အိမ်တွေဆို မိန်းကလေးတွေ လိုက်သွားရတယ်။
အောက်တိုဘာ ၁၉ ရက်က Daily Telegraph ၀က်ဘ်ဆိုဒ်တွင် ကလေးတစ်ဦး၏ ဦးခေါင်းအတွင်း ကျည်ဆန်ရှိနေ သည့် အနေအထားကို ဓာတ်မှန်ရိုက်ထားသော ဗီဒီယိုဖိုင်နှင့် သတင်းများ ထွက်လာခြင်းအပေါ် ဆီရီးယားပြန်ကြား ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ယခုကဲ့သို့ အခြေအမြစ် မရှိသည့် စွပ်စွဲချက်ဟုတရားဝင် ငြင်းဆိုခဲ့ခြင်ဖြစ်သည်။ ဝက်ဘ်ဆိုဒ်တွင် ဆီးရီးယားဆေးရုံတွင် ငါးပါတ်ကြာ စေတနာ့ဝန်ထမ်းအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သော ဗြိတိန်ခွဲစိတ်ဆရာဝန် တစ်ဦး၏ ပြောကြားချက်အပေါ် အခြေခံ၍ ရေးသားထားခြင်း ဖြစ်သည်။
ဆီရီးယားက ထိုသတင်းမှားသည် ဆီးရီးယားကို ဆန်ကျင်သည့် နိုင်ငံများနှင့် အနောက်အုပ်စု၏ မီဒီယာထိုးစစ်သာ ဖြစ်သည်ဟု တုံ့ပြန်ထားသည်။
၀ါရှင်တန် ၊ အောက်တိုဘာ ၂၁ ၊ Ref-AFP
မိန်းကလေးများအတွက် ပညာရေးကို ရပ်တည်ကာကွယ် ပေးမှုကြောင့် တာလီဘန်လုပ်ကြံ သတ်ဖြတ်မှု၏ ပစ်မှတ်ထားခံခဲ့ရ သော အသက်၁၆နှစ်အရွယ် ပါ ကစ္စတန်ဆယ်ကျော်သက် မာလာ လာယူဆက်ဇိုင်းက မိန်းကလေး များပညာရေးကို ထောက်ခံမှုကို အားပေးသော စာသင်ကျောင်း သင်ရိုးညွှန်းတမ်းတစ်ခု ဖြစ်ထွန်း လာရေး လှုံ့ဆော်လျက်ရှိသည်။
မကြာသေးမီက မာလာလာ ထုတ်ဝေခဲ့သည့် စာအုပ်တစ်အုပ် နှင့်လိုက်ဖက်စေရန် မဟာဌာန အဖွဲ့ဝင်များသည် ဆက်သွယ် မှုနည်းလမ်းစုံ သင်ရိုးညွှန်းတမ်း ကိရိယာများ ဖန်တီးလျက်ရှိ ကြောင်း ဂျော့ဂ်ျဝါရှင်တန်တက္က သိုလ်က တနင်္လာနေ့တွင် ကြေ ညာခဲ့သည်။
နန်းခင်ဇေယျာနဲ့ နိုင်ငံတကာ မယ်အဖွဲ့ ပုဂံဒေသကို ခရီးဆက်
Posted by drmyochit Tuesday, October 22, 2013, under အနုပညာ | No comments
မနှစ်က ဂျပန်နိုင်ငံမှာ ကျင်းပခဲ့တဲ့ Miss International ပြိုင်ပွဲမှာ Miss Internet ဆုရခဲ့တဲ့ နန်းခင်ဇေယျာ ဟာ မြန်မာနိုင်ငံကို ရောက်လာတဲ့ နိုင်ငံတကာက Miss International တွေကို အခုရက်ပိုင်း ရန်ကုန်မှာ လိုက်လံ ရှင်းလင်းပြသရတဲ့ တိုးရစ်ဂိုက် တာဝန် ယူနေပါတယ်။
ဒီကနေ့ မနက်ကတော့ နန်းခင်ဇေယျာ ဦးဆောင်တဲ့ မယ်တွေဟာ မြန်မာ့ရှေးဟောင်းမြို့တော်ဖြစ်တဲ့ ပုဂံ ဒေသဆီကို ထွက်ခွာသွားပါပြီ။
Bye Yangon . See you soon Bagan fans! လို့ နန်းခင်ဇေယျာက ဆိုထားပါတယ်။
ရန်ကုန်မှာ သူတို့ အဖွဲ့ ရှိစဉ်မှာ မြန်မာ့လူမှုဘ၀တွေကို လေ့လာခဲ့ကြသလို တင်ဆက်မှုတချို့လည်း လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပါတယ်။ ရန်ကုန်မြို့တခွင် အလှမယ်တွေရဲ့ လှုပ်ရှားမှု ဓာတ်ပုံတွေကို နန်းခင်ဇေယျာက သူ့ ဖေ့စ်ဘုတ်ကတဆင့် အသိပေး ဖော်ပြထားချက်တချို့ စုစည်း ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
နန်းခင်ဇေယျာ၊ နိုင်ငံတကာ မယ်တချို့နဲ့ ရန်ကုန်ကို ရောက်နေတဲ့ နာမည်ကြီးထိုင်းအဆိုတော် ကာရာဘောင်း
သီတင်းကျွတ်ကာလ လူငယ်အတွေး စိတ်ကူးပုံရိပ်နှင့် လွှမ်းပိုင် ထက်ထက် (Bobby Soxer)
မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုအနှစ်သာရပွဲတော်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ ဝါလကင်းလွတ်သီတင်းကျွတ်ကာလမှာ လူငယ်တို့ အနေနဲ့ မိမိတို့ကြည်နူး ရင်ခုန် ဖွယ်ရာကောင်းတဲ့ နေရာလေးတွေမှာ သီတင်းကျွတ် ကာလ ပုံရိပ်လေးတွေဖြစ် တဲ့ မီးရှူးမီးပန်း၊ မီးပုံပျံလေးများနဲ့အတူချစ်သူမိတ်ဆွေတို့နဲ့ဝိုင်းဖွဲ့လို့ လွတ်လပ် စွာဖြတ်သန်းပျော်ရွှင်လေ့ ရှိကြပါတယ်။ဒါ့ကြောင့် လူငယ်အဆိုတော်တွေဖြစ်ကြတဲ့ လွှမ်းပိုင်နဲ့ ထက်ထက်(Bobby Soxer) တို့ရဲ့ လူငယ်စိတ်ကူးနှင့် ပြည်သူ့ရင်ပြင်မှာ သီတင်းကျွတ်ကာလပျော်ရွှင် စွာဖြတ်သန်းပုံတွေ ကိုဖန်တီးပုံဖော်ရိုက်ကူး ခဲ့ပြီးသူတို့ရဲ့ သီတင်းကျွတ် လူငယ်ရင်ခုန်သံ စကားများကို လည်းမေးမြန်းဖြစ် ခဲ့ပါတယ်။
ထက်ထက်(Bobby Soxer) -
Posted by drmyochit Tuesday, October 22, 2013, under ဗဟုသုတ | No comments
ပျိုမေတို့ရေ ဒေါက်ဖိနပ်လေးတွေစီးပြီး စမတ်ကျကျလမ်းလျှောက်နိုင်တဲ့သူ ဖြစ်ချင်ပါသလား။ ဒေါက်ဖိနပ် စီးပြီး ရရှိလာတတ်တဲ့ အခက်အခဲတွေကို ကူညီဖြေရှင်းပေးနိုင်ဖို့အတွက် နည်းလမ်းတချို့ကို လမ်းညွှန်ပေး လိုက်တယ်နော်။
မေတို့အနေနဲ့ ကိုယ်နဲ့ အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်တဲ့ ဒေါက်ဖိနပ်မျိုးကို သေသေချာချာ ရွေးချယ်ရပါတယ်။ ဖိနပ်ဆိုင် မှာ ကိုယ့်ရဲ့ဆိုဒ်နဲ့ ကွက်တိဖြစ်တဲ့ ဖိနပ်က အရောင်းကုန်သွားလို့သူ့ထက် တစ်ဆိုဒ်ကြီးတာမျိုးကို မ၀ယ် မိပါစေ နဲ့။ ကိုယ့်ရဲ့ဖိနပ်ဆိုဒ်က ဘယ်လောက်လဲဆိုတာကို သေသေချာချာ မသိဘူးဆိုရင် ဖိနပ်ဆိုင် ကို သွားပြီး ကိုယ့်ခြေထောက်ရဲ့ဆိုဒ်ကို တိုင်းပါ။ အဲဒီဆိုင်တွေက ကိုယ့်ခြေထောက်ရဲ့ဆိုဒ်နဲ့ ခြေထောက် ပုံသဏ္ဌာန် အမျိုး အစားကိုပါ ပြောပြပေးနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ-ခြေထောက်ကျယ်ကျယ်(သို့) ခြေဖ မိုးမောက်မောက်ပြည့်ပြည့် အစရှိသဖြင့် ပြောပြပေးနိုင်ပါတယ်။
ခြေထောက်တိုင်းဟာ ဖိနပ်စတိုင်(လ်)အမျိုးအစားအားလုံးကိုစီးလို့ လိုက်ဖက်မှု မရှိပါဘူး။ ဒါ့ကြောင့် ကိုယ့်ခြေထောက်နဲ့ လိုက်ဖက်တဲ့ ဖိနပ် Style မျိုးကို ရွေးချယ်ရပါမယ်။ ကိုယ်ရွေးလိုက်တဲ့ ဖိနပ်ကလည်း ကိုယ့် အတွက် အမှန်တကယ် သက်သောင့်သက်သာရှိဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ အောက်ခြေမညီ၊ သက်သောင့် သက်သာ မရှိတဲ့ ဖိနပ်တွေဟာ လမ်းလျှောက်ဖို့အတွက် ဘယ်လိုမှ အဆင်ပြေစေနိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ Style ကျစေနိုင်ဖို့ အတွက် ကိုယ့်ခြေထောက်နဲ့ ဖိနပ်က တစ်သားတည်းဖြစ်နေဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ခြေ ဆစ်ပိုင်း၊ ခြေမျက်စိပိုင်း၊ နားတွေမှာ လိမ်သွားတာမျိုး၊ စောင်း/ယိုင်သွားတာမျိုး မဖြစ်သင့်ပါဘူး။ ဘယ်လို Style မျိုးကို ရွေးချယ်ရမလဲဆိုတာ မသိဘူးဆိုရင်တော့ ကြိုးသိုင်း ဒေါက်ဖိနပ်မြင့်မြင့်လေးတွေကို အရင်ဆုံး စစ်ဆေးပြီး ရွေးချယ်ကြည့်ပါလို့ အကြံပြုပါရစေနော်။
ဆိုးပြားတွေက ဖိနပ်တစ်ရန်မှာ အရေးကြီးတဲ့ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုပါ။ ဒါ့ကြောင့် အချိန်ပေးပြီး စစ်ဆေးပါ။ ဖိနပ်က ဆိုးပြား ဟာ လုံးဝပြားချပ်နေရပါမယ်။ ကြမ်းပြင်နဲ့ တိုက်ရိုက်ထိတွေ့မှုရှိရပါမယ်။ အောက်ခြေလှေ ပုံသဏ္ဌာန်ရှိတဲ့ ဖိနပ်တွေမှာ ဆိုးပြားအကုန်လုံးက ကြမ်းပြင်နဲ့ ထိတွေ့မှုမရှိတဲ့အတွက် လမ်းလျှောက်ရတာ လွယ်ကူသက်သာမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
ဒေါက်ဖိနပ်တွေက ပျိုပျိုတို့ရဲ့ ဟန်ပန်အသွင်ကို ပိုမိုအချိုးကျလှပစေနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒေါက်ဖိနပ် စီးပြီး လမ်းလျှောက်တတ်ဖို့တော့ လိုအပ်ပါတယ်။ လမ်းလျှောက်တဲ့အခါ ပျိုပျိုတို့ရဲ့ ဦးခေါင်းကို မတ်မတ် ထားပြီး ပခုံးကိုလည်း မကိုင်းပါစေနဲ့။ ဒေါက်ဖိနပ် စီးပြီးတော့ အခုလို နည်းစနစ်၊ အနေအထား မှန်မှန်နဲ့ လမ်းလျှောက်နိုင် မယ်ဆိုရင် ပိုမိုသက်သောင့်သက်သာရှိပြီး ပိုငြိမ်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ကြွက်သားတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းကို မလုပ်တော့ဘူးဆိုရင် ထင်သလောက် မသန်မာဘူး ဆိုတာ ကို သတိထားမိကြပါသလား။ Gym တစ်ခုခုမှာ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ဖို့ တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။ ဒေါက်ဖိနပ်စီးပြီး လမ်းလျှောက်တဲ့ အခါမှာ ကျွန်မတို့ ကြွက်သားတွေရဲ့ အခန်းကဏ္ဍက အရေးပါလာပါပြီ။ ကြွက်သားတွေ သန်မာရင် လမ်းလျှောက်ရတာ ပိုပြီးလွယ်ကူ အဆင်ပြေစေပါတယ်။ ပျိုပျိုတို့အနေနဲ့လည်း ကိုယ့်ရဲ့ကြွက် သားသန်မာမှုက ကိုယ့်ရဲ့လမ်းလျှောက်နိုင်မှုအပေါ် ဘယ်လောက်အထိ ထိန်း ချုပ်ပေးနိုင်တယ်၊ ခါး၊ ပခုံးတွေ မကိုင်းဘဲ ပုံသဏ္ဌာန်မှန်မှန်နဲ့ စမတ်ကျကျ လမ်းလျှောက်နိုင်စေတယ်ဆိုတာကို လက်တွေ့ သိလာပါလိ မ့်မယ်။
အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းကတော့ ဒေါက်ဖိနပ်စီးပြီး လမ်းများများလျှောက်ကြည့်ဖို့ပါပဲ။ ကိုယ်နဲ့ အံဝင်ခွင် ကျဖြစ်တဲ့ ဖိနပ်တွေကို စီးကြည့်ပြီး အိမ်ထဲမှာ လမ်းလျှောက်ကြည့်ပါ။ အစပိုင်းတော့ အချိန် အနည်းငယ် သာပေးပြီး လေ့ကျင့်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျင့်သားမရသေးတော့ ပျိုပျိုရဲ့ခြေထောက်လေးတွေက အကြာကြီး စီးနိုင်မှာ မဟုတ်သေးလို့ပါ။ ကိုယ်စီးချင်တဲ့ အချိန်အတိုင်းအတာ ဘယ်လောက်ကြာကြာ အထိပဲဖြစ်ဖြစ် စီးနိုင်အောင် လေ့ကျင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒေါက်ဖိနပ်လေးနဲ့ စတိုင်ကျကျ လန်းချင် သူလေးတွေ အတွက် အခုလက်ဆောင်ပေးလိုက်တဲ့ နည်းကောင်းလမ်းကောင်းလေးတွေအတိုင်း ကျင့်သုံးကြ ဖို့ မမေ့ပါနဲ့နော်။
Posted by drmyochit Tuesday, October 22, 2013, under သတင်းများ | No comments
မြန်မာနိုင်ငံ ​အနောက်ပိုင်း ​ရခိုင်ပြည်နယ်က ​လျှပ်စစ်မီးလုံလောက်စွာပေးဖို့ ​ဒေသခံတွေက ​အစိုးရကိုတောင်းဆိုနေတဲ့အချိန်မှာပဲ ​ရခိုင်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ ​သဘာဝ ​ဓါတ်ငွေ့ပိုက်လိုင်းကနေထွက်ရှိတဲ့ ​စွမ်းအင်တွေကို ​တရုတ်နိုင်ငံက ​အပြည့်အ၀ ​ရယူသုံးဆောင်နေပြီလို့ ​တရုတ်အစိုးရပိုင် ​သတင်း ​မီဒီယာကပြောပါတယ်။
ဒီလျှပ်စစ်မီးဟာ ​ရခိုင်ပြည်နယ် ​ကျော်ဖြူမြို့ဖက်ကနေ ​တရုတ်နိုင်ငံ ​အနောက်တောင်ဖက်ခြမ်းမှာရှိတဲ့ ​မြို့တွေကို ​ပေးဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ ​အကွာအဝေးအားဖြင့်တော့ ​ကီလိုမီတာ ​၂၅၀၀ ​ကျော်ရှိပါတယ်။ ​လျှပ်စစ်မီးကို ​ရရှိတဲ့မြို့တွေကတော့ ​Yunnan, ​Guizhou, ​Chongging ​နဲ့ ​Guangxi ​တို့ဖြစ်ကြပါတယ်။
သုံးနှစ်ကြာတည်ဆောက်ခဲ့ရတဲ့ ​ဒီလျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်မှု ​စီမံကိန်းဟာ ​ဇူလိုင်လလောက်ကစပြီး ​တရုတ်နိုင်ငံကို ​ပေးဆောင်နေတာ ​ဖြစ်ပြီးတော့ ​ပြီးခဲ့တဲ့ ​တနင်္ဂနွေနေ့မှာ ​အပြည့်အ၀ ​စတင်လည်ပတ်နေတာ ​ဖြစ်ပါတယ်။
တရုတ်နိုင်ငံက ​လျှပ်စစ်မီး ​အပြည့်အ၀ ​စတင်ရရှိနေပြီးဖြစ်ပေမယ် ​ဒီသဘာဝ ​ဓာတ်ငွေ့ ​စီမံကိန်းကြောင့် ​ဒေသခံတွေ ဆီကနေ ​အတင်းအဓ္ဓမ ​သိမ်းဆည်းထားတဲ့ ​မြေတွေရဲ့ ​ပြဿနာနဲ့ ​ သဘာဝ ​ပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်နစ် နာမှုကိစ္စတွေဟာ ​မြန်မာအစိုးရဖက်က ​ဖြေရှင်းမပေးနိုင်သေးတဲ့ ​အတွက် ​စိုးရိမ်စ ရာတွေဖြစ်နေတယ်လို့ ​လူ့အခွင့်အရေးနဲ့ ​ဘဘာဝ ​ပတ်ဝန်ကျင် ​ထိန်းသိမ်းရေး ​အဖွဲ့တွေက ​ပြောပါတယ်။
အခုရခိုင်ပြည်နယ်က ​သဘာဝ ​ဓာတ်ငွေ့ပိုက်လိုင်းကနေပြီး ​ရရှိတဲ့လျှပ်စစ်မီးဟာ ​ တရုတ်နိုင်ငံကို ​ကုပမီတာ ​၁၂ ​ဘီလီယံ ​လောက်ပေးဝေနိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် ​တရုတ်နိုင်ငံက ​သဘာဝဓာတ်ငွေ့ ​အသုံးစရိတ် သက်သာမှာဖြစ်တဲ့အပြင် ​ကျောက်မီးသွေးအသုံးမှုလည်း ​လျော့ကျသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒေသတွင်း ​သံယံဇာတကို ​ကိုယ်ပိုင်စီမံခန့်ခွဲပိုင်ခွင့်ရရေးတောင်းဆိုမြန်မာနိုင်ငံ ​အနောက် ပိုင်း ​ရခိုင်ပြည်နယ်က ​ထွက်ရှိတဲ့ ​သဘာဝသယံဇာတတွေကို ​တူးဖော်ထုတ်လုပ်ရောင်းချနေတာနဲ့ ​ပတ်သက်ပြီး ​ဒေသခံပြည် သူများအနေနဲ့ ​ကိုယ်ပိုင်စီမံခန့်ခွဲပိုင်ခွင့်ကို ​ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအတွင်း ​ထည့်သွင်းပြ ဌာန်းပေး ဖို့ ​ပြည်သူ့ ​သယံဇာတအဖွဲ့က ​အစိုးရကို ​တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။
ရခိုင်နိုင်ငံရေးပါတီတွေ၊ ​ရခိုင်ပြည်နယ် ​၁၇ ​မြို့နယ်က ​ကိုယ်စားလှယ်တွေ၊ ​အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းတွေက ​မနေ့က ​တောင်း ဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။
ရခိုင်ပြည်နယ် ​အတွင်းမှာရှိတဲ့ ​သဘာဝဓါတ်ငွေ့စီမံ ​ကိန်းတွေ၊ ​အထူးစီပွားရေးဇုန်စီမံကိန်းတွေ၊ ​သတ္တု တူးဖော် ထုတ်လုပ် တဲ့စီမံကိန်းတွေနဲ့ ​ရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်း ​တွေကို ​ပြည်သူလူထုသဘောဆန္ဒမပါပဲ ​လုပ်ဆောင်နေ တာဖြစ်တယ်လို့ ​ပြည်သူ့သယံဇာတအဖွဲ့က ​ကိုထွန်း ​ကြည်က ​အခုလိုပြောပါတယ်။
“ကျနော်တို့အခုခံစားနေရတာပေါ့လေ၊ ​ကျနော်တို့ရခိုင်ပြည်မှာရှိတဲ့ ​စီမံကိန်းတွေအများစုက ​ရခိုင်ပြည် သူတွေ ​ရဲ့ဆန္ဒမပါဘူး၊ ​အဲဒီအခါကျတော့ ​ရခိုင့်အနေနဲ့ ​ရခိုင်တယံဇာတကို ​ရခိုင်ကိုယ် တိုင်ပြန်လည်ပြီးတော့ ​ခွဲဝေ ​ပိုင်ခွင့်ဆိုတဲ့ ​သဘောမျိုးပါပဲ၊ ​ကျနော်တို့တိုင်ပြည်ရဲ့ ​အခြေခံဥ ပဒေကိုယ် တိုင်ကကို ​ဥပမာပေါ့ဗျာ ​ပြည်နယ်တခုရဲ့ ​တယံဖာတာကို ​ဖောက်လုပ်တဲ့နေရာမှာ ​အဲဒီပြည်နယ် ဘယ်လောက် ပိုင်ဆိုင်ရမယ်ဆိုတဲ့ ​အခြေခံဥပဒေ ​ကျနော်တို့ ​နိုင်ငံမှာ ​မရှိသေးတဲ့အခါကျတော့ ​ဗဟိုအစိုး ရက ​ထောက်ပံတဲ့ ​ဗဟိုအစိုးရကပေးတဲ့ဟာလောက်ပဲ ​ကျနော်တို့က ​ရရှိတာပဲရှိတာပေါ့ဗျာ ​၊ ​အဲဒီအခါ ကျတော့ ​ကျနော်တို့ ​ဌာနေတိုင်းရင်းသားတွေကကျတော့ ​ကိုယ့်မှာရှိတဲ့ ​သယံဇာတ ​အားလုံးကို ​ကိုယ်ကို တိုင်စီမံခွင့် ရချင်တယ်၊ ​အဲလိုသဘောမျိုးပါ။” ​
ရခိုင်ပြည်နယ်က ​ထွက်ရှိတဲ့ ​သဘာဝဓါတ်ငွေ့ကို ​လျှပ်စစ်ဓါတ်အား ​၂၄နာရီသုံးစွဲခွင့်နဲ့ ​စစ်မှန်တဲ့ဖက်ဒရယ် ​ပြည်ထောင် စု စနစ် ​မဖော်ဆောင်နိုင်သေးသရွေ့ ​သဘာဝတယံဇာတ ​ထုတ်ယူသုံးစွဲမဲ့စီမံကိန်းကို ​လုံးဝရပ် ဆိုင်း ​ထားဖို့အတွက် ​တောင်းဆိုထားပါတယ်။
ပြီးတော့ ​ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း ​ရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်းတွေဖြစ်တဲ့ ​လေးမြို့ရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်း၊ ​ကုလား တန်မြစ်စီမံကိန်း၊ ​မြဒေးကျွန်းရေနက်ဆိပ်ကမ်းစီမံကိန်း၊ ​သူဌေးချောင်းရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်း၊ ​အမ်းချောင်းရေ ​အားလျှပ်စစ်စီမံကိန်း ​၊ ​ကျောက်ဖြူ-ကူမင်းရထားလမ်း ​စီမံကိန်း၊ ​နေပူတောင်စီမံကိန်းနဲ့ ​တိုက်တေနီယန်ထုတ်လုပ်မှုစီမံကိန်းတွေကို ​အမြန်ဆုံးရပ်တန့်ပေးဖို့လည်း ​ပြည်သူ့သယံဇာတအဖွဲ့က ​တောင်းဆိုထားတဲ့အကြောင်း ​ရေဒီယိုသြစတြေးလျသတင်းထောက် ​မြတ်မိုးက ​သတင်းပေး ပို့ထားတာဖြစ် ပါတယ်။
ယာက်ျားတိုင်းရဲ့ Scrotum ကပ်ပယ်အိတ် တဖက်စီထဲမယ် Testis ဝှေးစေ့ တလုံးစီ ရှိကြရတယ်။ အစေ့အထက်မှာ အထက်-အောက် တန်းနေတာကို အကြောလို့ အလွယ်ခေါ်တဲ့ထဲမှာ Arteries and Vein သွေးကြောတွေ၊ Nerve အာရုံကြောနဲ့ Vas deferens သုတ်ရည်ပြွန်အားလုံးက ကပ်နေကြပြီး လက်ချောင်းလေး တချောင်း စာလောက်သာ တုတ်တယ်။
17.10.2013 တွင် မလေးရှားနိုင်ငံ ကွာလာလမ်ပူမြို့ အမ်ပန်းဆေးရုံကြီးအနောက်ဘက် ၊ ပန်းဒန်းမယ်ဝ တွင် အလုပ်လုပ်ကိုင်လျှက်ရှိသော မြန်မာအမျိုးသမီးတစ်ဦး ဖြစ်သည့် မဝေမာလင်း နှင့် အခြား အမျိုး သမီး တစ်ဦး လုပ်ငန်းခွင်အတွင်းစကားအခြေအတင်များကြရာမှ အခြားအမျိုးသမီးတစ်ဦးမှ မကြေမနပ်ဖြစ်ကာ အမျိုး သား ၅ ဦးအား အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်ရန် စေခိုင်းခဲ့ပြီး 18.10.2013 နေ့တွင် မဝေမာလင်း နှင့် သူမ၏ အမျိုး သားအလုပ်မှအပြန် စောင့်ဆိုင်းကာ အကြမ်းဖက်တိုက်ခံစေခဲ့ကြောင်းသိရပါသည် ။
မယ်ရီလင် မွန်ရိုး မျက်နှာ ဟာ ပလက်စတပ် ဆာဂျရီနဲ့ ခွဲစိတ် ပြုပြင်ထားတယ် ဆိုရင် ယုံမှာလား
Posted by drmyochit Tuesday, October 22, 2013, under နိုင်ငံတကာအနုပညာ | No comments
၁၉၅၀ ပြည့်လွန်နှစ်တွေ တုန်းက လျှမ်းလျှမ်း တောက် ကျော်ကြားခဲ့တဲ့ မင်းသမီးချော မယ်ရီလင် မွန်ရိုးဟာ ပလပ်စတစ် ဆာဂျရီ လုပ်ပြီး မျက်နှာကို ပြုပြင်ခဲ့တယ် ဆိုတာကို အခု တွေ့ရှိရတဲ့ သူ့ရဲ့ ဆေးမှတ်တမ်းတွေက သက်သေခံနေပါတယ်။
သိပ်လှတယ်လို့ လူတိုင်းက ပြောရလောက်တဲ့ မယ်ရီလင် မွန်ရိုးရဲ့ မျက်နှာဟာ သဘာဝ အတိုင်းဘဲလို့ ထင်ရပေမယ့် တကယ်တော့ ခွဲစိတ် ပြုပြင်ထားတာ ဖြစ်တယ် ဆိုတာကို x-ray ဓါတ်မှန် ခြောက်ချပ် က ညွှန်ပြ နေပါတယ်။
မြန်မာ့ မယ်စကြဝဠာလောင်း ရွေးလိုက်ပြီ
အဲဒီဓါတ်မှန် တွေကို မိုက်ကယ်ဂါဒင် ဆိုတဲ့ ဟောလီးဝုဒ် ပလပ်စတစ် ဆာဂျရီ ဆရာဝန်က အမည်မသိရတဲ့ လူတဦးဆီ ပေးခဲ့ပြီး အခုတော့ ကယ်လီဖိုးနီးယား ပြည်နယ်မှာ နိုဝင်ဘာလ ကျရင် လေလံတင် ဈေးပြိုင် ရောင်းချဖို့ လုပ်နေပါတယ်။
ပြင်ထားတဲ့ သူ့ရဲ့ မေးရိုးဟာပြန်ပြီး ပုံပျက်လာတယ်ဆိုပြီး ဆရာဝန်ကို ပြောခဲ့တာကို ၁၉၅၀ ပြည့်လွန်နှစ်တွေတုန်းက သူ့ရဲ့ ဆေးမှတ်တမ်းတွေမှာ တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။
ဒါ့အပြင် သူ့ရဲ့ နှာခေါင်းကို ခွဲစိတ်ပြုပြင်ခဲ့တဲ့မှတ်တမ်းကိုလည်း တွေ့ရပါတယ်။
လှချင်တဲ့ အမျိုးသမီးတွေ ပလပ်စတစ် ဆာဂျရီ လုပ်ပြီး မျက်နှာကအစ ကိုယ်လက်အင်္ဂါ တွေကိုအမျိုးမျိုး ပြုပြင်ကြတာ ဒီခေတ်မှာ မဆန်းပေမယ့် မယ်ရီလင် မွန်ရိုးတို့ရဲ့ခေတ် ၁၉၅၀ ပြည့်လွန်နှစ်တွေ တုန်းကတော့ တော်တော် ရှားရှားပါးပါး ဖြစ်ပါတယ်။
မယ်ရီလင်မွန်ရိုးဟာ ပလပ်စတစ် ဆာဂျရီနည်းကို သုံးခဲ့တယ်လို့ ဘယ်သူမှ မထင်ခဲ့ကြကြောင်းနဲ့ သူတကယ်ဘဲ အဲဒီလို လုပ်ခဲ့တာ ဟုတ်မဟုတ် ဆိုတာကို ခန့်မှန်းပြီးသာ ပြောခဲ့ကြပါတယ်လို့ Julian’s Auction လေလံကုမ္ပဏီက Martin Nolan က ပြောပါတယ်။
သူဟာ သဘာဝအတိုင်းလှတဲ့သူလို့ သတ်မှတ်ထားပြီး ခွဲစိတ်ပြုပြင်တယ်ဆိုတာကို ဘယ်သူမှ မယုံချင်ကြဘဲ ၊ ၁၉၅၀ ပြည့်လွန်နှစ်တွေတုန်းက ပလပ်စတစ် ဆာဂျရီနည်းပညာ ဟာ အတော်ကို အသစ်အဆန်း ဖြစ်နေတဲ့ အချိန်ပါလို့ မာတင် နိုလန်က ဆိုပါတယ်။
ဒါပေမယ့် မာရီလင်မွန်ရိုးကတော့ နောက်ဆုံးပေါ် နည်းပညာတွေကို သုံးနိုင် တာပေါ့လို့ Martin Nolan က ရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီဓါတ်မှန်တွေကို မွန်ရိုးမကွယ်လွန်ခင် ၂ လအလို ၁၉၆၂ ခု၊ ဇွန်လ တုန်းကရိုက်ထားတာ ဖြစ်ပြီး Joan Newman ဆိုတဲ့ နာမည်နဲ့ သူ့ရဲ့ဆေးမှတ်တမ်းကို ဖိုင်ဖွင့်ထားခဲ့တာ ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
အဲဒီ x-ray တွေကို နိုဝင်ဘာလကျရင် ဘယ်ဗာလီဟေးလ်မှာ လေလံတင်တဲ့အခါ ဒေါ်လာ ၂ သောင်းနဲ့ ၃ သောင်းကြားပေးပြီး ဝယ်လိမ့်မယ် လို့ ခန့်မှန်းထားပါတယ်။
သူ့ရဲ့ရင်ဘတ်ကို ရိုက်ထားတဲ့ ဓါတ်မှန်ကို လွန်ခဲ့တဲ့သုံးနှစ်တုန်းက လေလံတင်ခဲ့ တုန်းက ဒေါ်လာလေးသောင်းခွဲ အထိ ရခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
လူမှု ကွန်ယက် ဝက်ဘ်ဆိုက် ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ မေလတုန်းက ယာယီ တားမြစ်ပိတ်ပင်ခဲ့တဲ့ လူခေါင်းဖြတ်တဲ့ ပုံတွေ အပါအဝင် ကြမ်းတမ်းတဲ့ မမြင်ဖွယ် ပုံတွေကို အွန်လိုင်း ဗီဒီယို အဖြစ် ပြန်တင်ခွင့် ပြုလိုက်ပါတယ်။
အဲဒီလို တင်ခွင့်ပြုတာဟာ ဒီလုပ်ရပ်ကို ရှုတ်ချဖို့ ဖြစ်တယ် ၊ ဒါမျိုးတွေကို ချီးမွှမ်း ထောပနာ ပြုဖို့ မဟုတ်ဘူးလို့ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်က ပြောပါတယ်။
အဲဒီလို ကြည့်ရှုဖို့ မတင့်တယ်တဲ့ ကြမ်းတမ်းတဲ့ ပုံတွေမှာ သတိပေးချက် ထည့်ရင်ကောင်းမလား ဆိုတာကို စဉ်းစားနေတယ်လို့လည်း သူတို့က ဆိုပါတယ်။
ကိုယ့်ကိုယ်ကို အဆုံးစီရင်မှု တားမြစ်ရေး ပရဟိတ အဖွဲ့တွေနဲ့ အွန်လိုင်း လုံခြုံရေး အဖွဲ့တွေက ဝေဖန် ပြောဆိုမှု ထွက်လာခဲ့ပြီးတဲ့နောက် ဖေ့စ်ဘွတ်ခ် အခုလို သတိပေးချက် ထည့်သွင်းဖို့ စဉ်းစားချက် ပေါ်ပေါက်လာတာ ဖြစ်ပါတယ်။
Childnet International ပရဟိတ အဖွဲ့ကြီးကတော့ ဒီဗီဒီယို ရုပ်ပုံတွေက ကြမ်းတမ်းပြီး လူတွေ မြင်ကွင်းပေါ် ရောက်မလာသင့်ဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။
လွယ်ဂျယ်မြို့နယ် အတွင်းရှိ သကျမာရဇိန် အောင်တော်မူ တောင်ပေါ်ဘုရား သာသနိက အဆောက်အဦများ ဖျက်ဆီးခံရခြင်း အပေါ် ရှမ်းလူမျိုး ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များမှ ကျေနပ်မှု မရှိ
Posted by drmyochit Tuesday, October 22, 2013, under ပြည်တွင်းသတင်းများ | No comments
လွယ်ဂျယ်မြို့နယ်ခွဲ၏ အနောက်တောင်ဘက် ၂ မိုင်ခန့်အကွာတွင်ရှိသော သကျမာရ်ဇိန် အောင်တော်မူ တောင်ပေါ်ဘုရား ဘုန်းကြီးကျောင်း၏ ကျောင်းထိုင်ဆရာတော် ဘဒ္ဒ န္တ၀ါရိန္ဒ သက်တော် (၅၈)နှစ်၊ ၀ါတော် ၃၂ နှစ်သည် ၂၀၁၁ ခုနှစ် တပ်မတော်နှင့် ကေအိုင်အေ အဖွဲ့တို့ တိုက်ပွဲများ ဖြစ်ပွားခဲ့သဖြင့် တစ်ဘက် တရုတ် နိုင်ငံ၊ ကျန်ဖုန်းမြို့နယ်ရှိ ဘုန်းကြီးကျောင်းတစ်ကျောင်းတွင် သွားရောက်သီတင်းသုံးခဲ့ရပါသည်။ ၄င်းဘုန်းတော်ကြီး ကျောင်းအနီးရှိ တောထဲတွင် ကေအိုင်အေအဖွဲ့ တမဟ(၃)လက်အောက်ခံ တပ်ရင်း(၁၆)နှင့် တပ်ရင်း(၂၁) တို့မှ တပ်ဖွဲ့ဝင်များသွားလာလှုပ်ရှား နေထိုင်လျက်ရှိပြီး မိုင်းများလည်းထောင်ထား သဖြင့် ဒေသခံပြည်သူများ သွားလာမှုမရှိကြောင်း၊ ၂၀၁၃ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၃၀ ရက်နေ့တွင် သကျမုနိ ဆုတောင်းပြည့်ဘုရား ဂြိုဟ်နံထောင့် ၈ ထောင့်မှ ဗုဒ္ဓဆင်းတုတော် ၈ဆူ၊ သကျမုနိအောင်တော်မူစေတီမှ ဗုဒ္ဓဆင်းတုတော် ၅ ဆူ၊ ရှင်သီဝလိရုပ်ပွားတော်၊ ရှင်ဥပဂုတ္တရုပ်ပွားတော်၊ သကျမာရဇိန် အောင်တော်မူ ဘုရား၏ သမိုင်းကျောက်စာပြား များနှင့် ဆရာတော်ဘဒ္ဒ န္တ၀ါရိန္ဒ၏ အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများကိုလည်း ကေအိုင်အေအဖွဲ့မှ ဖျက်ဆီးသွားခဲ့ ကြောင်း ဆရာတော် ဘဒ္ဒ န္တ၀ါရိန္ဒမှ အောက်တိုဘာလ ၁၈ ရက်နေ့ နေ့လည် ၁၂နာရီ မိနစ် ၃၀ချိန်တွင် လွယ်ဂျယ်မြို့မှ မြို့မိမြို့ဖ များကို ပြောကြားခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါသည်။
သကျမာရဇိန် အောင်တော်မူတောင်ပေါ်ဘုရားအား ၁၉၅၉ ခုနှစ်တွင် ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ ဘဏ္ဍာရေးနှင့်အခွန်တော်ဌာန၀န်ကြီး ဗိုလ်ခင်မောင်ကလေးမှ ကြီးမှူး၍ တည်ထားကိုးကွယ်ခဲ့ပြီး ကျောင်းထိုင် ဆရာတော် ဦးစန္ဒိမာမှ ဆက်လက် သီတင်းသုံးနေထိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းနှင့် သာသနိက အဆောက်အဦများ ဖျက်ဆီးခြင်းခံရခြင်းအပေါ် လွယ်ဂျယ်မြို့နယ်ခွဲအတွင်းရှိ ရှမ်းလူမျိုး ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် များမှ ကျေနပ်မှုမရှိဘဲ အင်တာနက်သတင်းတင်ရန် စီစဉ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း သိရှိရပါသည်။